Mac တွင်ဗီဒီယိုမှအသံဖယ်ရှားနည်း ကျွန်တော်က mac ကပါ။
Mac ရှိ ဗီဒီယိုမှ အသံကို မည်ကဲ့သို့ ဖယ်ရှားနည်း
ဗီဒီယိုတစ်ခုမျှဝေခြင်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် ၎င်း၏အကြောင်းအရာပေါ်မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရှိသည်။ အသံဖယ်ရှားပါ. ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac မှ ဗီဒီယိုတစ်ခုကို ကူးယူခြင်း၊ နောက်ခံတေးဂီတထည့်ရန် တည်းဖြတ်သည့်အခါတွင်လည်း ထိုလိုအပ်ချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မြင်တွေ့နိုင်သည် ။
ဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် လိုချင်တယ်။ Mac ရှိ ဗီဒီယိုမှ အသံကို ဖယ်ရှားပါ။၊ ဤဆောင်းပါး၌၎င်းကိုပြုလုပ်နည်းကိုကျွန်ုပ်တို့သင်ပြလိမ့်မည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် အခမဲ့နှင့် အခပေးအပလီကေးရှင်းနှစ်ခုလုံးကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း iMovie ဟာ အခမဲ့ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ရေးအက်ပ် Apple သည် iOS နှင့် macOS အသုံးပြုသူအားလုံးအတွက် ရနိုင်စေပါသည်။ ၎င်းသည် ယူရို 300 ကျော်ကုန်ကျသည့် Apple ၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တည်းဖြတ်ဆော့ဖ်ဝဲအသေးစား Final Cut Pro နှင့်တူသည်။
iMovie ဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပုံစံပလိတ်များ၊ အကူးအပြောင်းအမျိုးမျိုးကို အသုံးပြု၍ အခြားရုပ်ပုံများနှင့် အစားထိုးရန်အတွက် အစိမ်းရောင် သို့မဟုတ် အပြာရောင်နောက်ခံဖြင့် ကစားနိုင်ရုံသာမက အံ့ဖွယ်ဗီဒီယိုများကို ဖန်တီးနိုင်သည်သာမက၊ မည်သည့်ဗီဒီယိုမှ အသံကို ဖယ်ရှားနိုင်စေပါသည်။
အကယ်၍ သင်သည် ယခင်က ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ခြင်းပရိုဂရမ်တစ်ခုနှင့် အလုပ်လုပ်ဖူးပါက၊ မည်သို့စစ်ဆေးနိုင်မည်နည်း။ iMovie ၏လုပ်ဆောင်ချက်သည်အလွန်ဆင်တူသည်။ဗီဒီယိုများ၏ အစီအစဥ်ကို ချမှတ်နိုင်စေမည့် အချိန်ဇယားများဖြင့်၊ ဖွင့်ထားသည့် အော်ဒီယိုသီချင်းများ ...
၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အသံကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် ဗီဒီယိုများတွင်၊aအဲဒီသီချင်းရဲ့ အသံအဆင့်ကို ပြပေးတဲ့ အစိမ်းရောင်လိုင်း. ပုံမှန်အားဖြင့်၊ အသံကို 100% ဖြင့် ဖွင့်သည် ဆိုသည်မှာ ၎င်းကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်အတိုင်း အသံအတိုးအကျယ်ဖြင့် ဖွင့်သည်။
အသံတိုးချင်ရင် လျှော့ရမယ်။ မောက်စ်ကို ထိုစာကြောင်းပေါ်တွင် တင်ပြီး သင့်လျော်သော အသံအတိုးအကျယ် အဆင့်ကို ရှာတွေ့သည်အထိ ၎င်းကို နှိမ့်ပါ။. သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့အလိုရှိသည်က ၎င်းကို လုံးဝဖယ်ရှားပစ်ရန်ဆိုလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အသံအတိုးအကျယ်အဆင့် သုညအထိ ထိုစာကြောင်းကို လျှော့ချရမည်ဖြစ်သည်။
ဗီဒီယို သို့မဟုတ် ဗီဒီယိုအပိုင်းအစကို သုညအထိ လျှော့ချပြီးသည်နှင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်းကိုသိမ်းဆည်းပါ ၎င်းကို ကျွန်ုပ်တို့ လိုချင်သော ဖော်မတ်သို့ တင်ပို့ပြီး နောက်မှ မျှဝေနိုင်ပါသည်။
သင်အလိုရှိသောအရာသည်အသံဖိုင်ကိုဖျက်ပစ်ပါ။ အခြားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်မည့် ဗီဒီယိုတစ်ခုဗီဒီယိုအားလုံး၏ အသံပုဒ်များသည် သီးခြားလွတ်လပ်သောကြောင့်၊ ၎င်းကို သင် သီးခြားဖျက်ရန် မလိုအပ်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းကို ဗီဒီယို၏ timeline တွင် သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သောကြောင့်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ လိုအပ်ချက်များအရ အသံကို မြှင့်တင်နိုင်၊ လျှော့ချနိုင်သည် သို့မဟုတ် ဖျက်နိုင်ပါသည်။ ကျန်ဗီဒီယိုများကို ထိခိုက်စေပါသည်။
သင်လုပ်နိုင်သည် iMovie ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။ ဤလင့်ခ်မှတဆင့် macOS အတွက် လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်။
VLC သည် စျေးကွက်တွင်ရနိုင်သော အကောင်းဆုံး ဗီဒီယိုဖွင့်စက်ဖြစ်ပြီး အကောင်းဆုံးဟု ပြောသည့်အခါ အကောင်းဆုံးကို ဆိုလိုသည်မဟုတ်ဘဲ အကောင်းဆုံးကို ဆိုလိုပါသည်။ ၎င်း၏ရှေးဟောင်းမျက်နှာပြင်ဘေးဖယ်၊ VLC သည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စျေးကွက်ရှိ ဗီဒီယိုနှင့် အသံဖော်မတ်များထဲမှ တစ်ခုချင်းစီနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော ကစားသမား.
ထို့အပြင်၊ open source ဖြစ်ပြီးထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန် ဤအပလီကေးရှင်းတွင် ယူရိုတစ်ခုတည်း သုံးစွဲရန် မလိုအပ်ပါ။ ဤပရောဂျက်ကို သုံးစွဲသူများ၏ လှူဒါန်းမှုများအပေါ် အခြေခံ၍ ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ၎င်းကို သင်စိတ်ကူးနိုင်သော လည်ပတ်မှုစနစ်အားလုံးအတွက် ရနိုင်သည်။
VLC သည် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော ဗီဒီယိုပလေယာတစ်ခုသာမကဘဲ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကဲ့သို့သော နောက်ထပ်အင်္ဂါရပ်အချို့လည်း ပါဝင်သည်။ YouTube ဗွီဒီယိုများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါအသံနှင့် ဗီဒီယိုကို တပြိုင်တည်းလုပ်ဆောင်ပါ (၎င်းတို့သည် လက်နှင့်မညီသည့်အခါ) နှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပင်၊ ဗီဒီယိုတစ်ခုမှ အသံကို ဖယ်ရှားပါ။.
မသန်စွမ်း ဗီဒီယိုတစ်ခုမှ အသံကို ဖယ်ရှားပါ။ VLC အက်ပလီကေးရှင်းဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော အဆင့်များကို လုပ်ဆောင်ရပါမည်။
VLC application ကိုဖွင့်ပြီးတာနဲ့၊ ကျနော်တို့ဗီဒီယိုကိုရွေးပါ အသံဖိုင်ကို ဖယ်ရှားလိုပါသည်။
ထို့နောက်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ ကိရိယာများ - ဦး စားပေးချက်များ။
နှစ်သက်ရာကဏ္ဍတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သွားပါ။ audio။ ဘယ်ဘက်အောက်ထောင့်တွင်နှိပ်ပါ todo.
ထိုအခါရှာဖွေရေး box ထဲမှာငါတို့ရေးပါ အသံကိုဖွင့်ပါ။
ညာဘက်ကော်လံတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အကွက်ကို အမှန်ခြစ်ဖြုတ်ပါ။ အသံဖွင့်ပါ.
နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ ကယ်ဆယ် ကျနော်တို့ပြုပြင်ထားသောပြောင်းလဲမှု။
ကျွန်ုပ်တို့အား ခွင့်ပြုနိုင်သော အခမဲ့နှင့် ပွင့်လင်းသော အရင်းအမြစ် အက်ပ်နောက်တစ်ခု ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ခြင်းတွင် Avidemux ဖြစ်သည်။စျေးကွက်တွင်နှစ်အနည်းငယ်ကြာရှိထားပြီးဖြစ်သောအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခု၊ အော်ဒီယိုနှင့်ဗီဒီယိုကိုထပ်တူပြုခြင်းပြဿနာရှိသောအခါတွင်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပုံမှန်အသုံးပြုခဲ့သောကြောင့်အနည်းဆုံးဝါရင့်သူအများစုသည်၎င်းကိုသင်ကြားဖူးသည်မှာသေချာပါသည်။
သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့အား အသံနှင့် ဗီဒီယိုကို ထပ်တူပြုနိုင်စေမည့်အပြင် အပလီကေးရှင်းလည်းရှိသည်။ အသံလမ်းကြောင်းကို ဖယ်ရှားနိုင်စေပါသည်။ ဗီဒီယိုတစ်ခုမှလုံးဝ။ Avidemux ဖြင့် ဗီဒီယိုတစ်ခုမှ အသံတေးသွားကို ဖယ်ရှားရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း လုပ်ဆောင်ရပါမည်-
ပထမဦးစွာကျွန်ုပ်တို့သည် application ကို run သည်။ အသံကို ဖယ်ရှားလိုသော ဗီဒီယိုကို ကျွန်ုပ်တို့ဖွင့်ပါသည်။
ထို့နောက်အပိုင်း၏ဘယ်ဘက်ကော်လံတွင် အသံ outputdrop-down menu ကိုနှိပ်ပြီးရွေးချယ်ပါ။ အဘယ်သူမျှမ (အင်္ဂလိပ်လိုမဟုတ်ပါ)။
နောက်ဆုံးတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ ဖိုင်မီနူးနှင့် Save ကိုရွေးချယ်ပါ။.
သင်လုပ်နိုင်သည် Avidex ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။ မှတဆင့် macOS အတွက် လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်။ ဒီ link ။
နှစ်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှ iMovie လည်းရှိလာပါတယ်။ အနိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်များ တိုးမြင့်လာသည်။ macOS တွင်လည်ပတ်နိုင်ရန်နှင့် လက်ရှိတွင် အနိမ့်ဆုံးပံ့ပိုးပေးထားသောဗားရှင်းမှာ macOS 11.5.1 Big Sur ဖြစ်သည်။
သင်၏အဖွဲ့ပါ iMovie နှင့် သဟဇာတမဖြစ်ပါ။သင့်ဗီဒီယိုများကို ရိုးရှင်းသောနည်းဖြင့် တည်းဖြတ်လိုသည်၊ ဗီဒီယိုများမှ အသံကို ဖယ်ရှားရန် ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည့်အပြင်၊ Mac App Store တွင် ကျွန်ုပ်တို့ အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်သည့် Cute Cut အက်ပ်ကို သင် စမ်းသုံးသင့်ပါသည်။ ၎င်းတွင် မည်သည့်အက်ပ်အတွင်း ဝယ်ယူမှုအမျိုးအစားမှ မပါဝင်ပါ။
ဤအပလီကေးရှင်း၏လုပ်ဆောင်ချက်သည် အခြားသော ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ရေးပရိုဂရမ်များနှင့် ဆင်တူသည်။ အဘို့ ဗီဒီယိုတစ်ခုမှ အသံကို ဖယ်ရှားပါ။၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းကို timeline တွင်ထည့်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ညာဘက်ကော်လံတွင်၊ အသံကဏ္ဍတွင်၊ အသံအတိုးအကျယ်ကို အနိမ့်ဆုံးသို့လျှော့ချရမည်ဖြစ်သည်။
ချစ်စရာဖြတ် OX 10.9 တွင် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်။1999 တွင်စျေးကွက်တွင်ထွက်ရှိခဲ့သောဗားရှင်းဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်ထိုနှစ်မှစ၍ မည်သည့် Mac နှင့်မဆိုသဟဇာတဖြစ်သည်။
သင်လုပ်နိုင်သည် Cute Cut ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။ ဤလင့်ခ်မှတဆင့် macOS အတွက် လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » Mac ရှိ ဗီဒီယိုမှ အသံကို မည်ကဲ့သို့ ဖယ်ရှားနည်း
ကပ်ရောဂါကြောင့် Apple က စတိုးဆိုင်တွေ တော်တော်များများ ပိတ်လိုက်ပါတယ်။